Soomaaliya oo Kenya kaga adkaaday golaha amaanka ee QM - NorSom News
Soomaaliya oo Kenya kaga adkaaday golaha amaanka ee QM
Safiirka Soomaaliya ee UN-ka: Abukar Baale
Xigasho/kilde: Caasimada Online
War hadda naga soo gaaray xarunta QM ee New York ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay si rasmi ah ugu fashilantay ololihii ay ka wadday halkaas ee ku aaddana qaraarka 1267 ee lagu beegsanayey Soomaaliya.
Kenya ayaa dooneysay in ururka Al-Shabaab lagu diro qaraarka 1267, si ay taas uga faa’iideysato inay cunqabateyn ku saarto Soomaaliya, islamarkaana ku beegsato hantida ganacsatada iyo shirkadaha Soomaaliyeed, iyo sidoo kale shaqsiyaadkii ay doonto.
Qaraarkan oo golaha ammaanka uu ansixiyey 15-kii October ee sanaddii 1999-kii ayaa diidaya in wax gargaar ah la gaarsiiyo deegaanada ay maamulaan koox kasta oo qaraarkan lagu daro, taasi oo haddii ay dhici lahayd diidi lahayd in dad badan oo ku dhibaateysan deegaanda ay maamulaan Al-Shabaab gargaar la gaarsiiyo.
Waxaa arrintaas si aad ah uga soo horjeeday dowladda Soomaaliya, hay’adaha caalamiga ah, wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka, iyo dalal kale oo dhowr ah.
Sida uu warbaahinta u xaqiijiyey danjiraha Soomaaliya ee QM Abuukar Daahir Cusmaan, in Al-Shabaab lagu daro qaraarkan ayaa waxaa diiday lix ka mid ah 15-ka dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka, oo laba ka mid ah ay yihiin xubnaha joogtada ah. Dalalka diiday ayaa kala ah: USA, France, Belgium, Germany, Poland iyo Kuwait.
Waxaa loo baahnaa kaliya inuu diido hal dal, si qorshaha Kenya ee ku-darista Al-Shabaab uu u fashilmo, hase yeeshee dadaal aan kala joogsi lahayn oo uu sameeyey danjiraha Soomaaliya ee QM Abuukar Daahir Cusmaan, ayaa lagu xaqiijiyey in ku-darista Al-Shabaab ee qaraarka 1267 ay diideen lix dal.
Kenya marnaba daacad kama ahayn in qaraarkan ay u adeegsato Al-Shabaab, balse waxa uu ujeedkiisu ahaa in lagu cunaqabateeyo Soomaaliya, ayada oo laga xanibayo gargaarka.
Al-Shabaab ayaa waxaa horey u saarnaa cunaqabateyn lagu saaray qaraar kale oo lagu magacaabo 751 oo lagu daray 2007, taasi oo caddeyn u ah inaysan marnaba daacad ka ahayn beegsiga Shabaab, ee ay ku jirtay dagaal kale,
Kenya ayaa sidoo kale haddii qaraarkan lagu dari lahaa Al-Shabaab uga faa’iideysan lahayd in shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ku beegsato, haddii ay lacago gaarsiiyaan shacabka ku nool deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab.
Waa guul-darro weyn oo taariikhi ah oo usoo hoyatay Kenya, iyo guul diblomaasiyeed kale oo ay Soomaaliya xaqiijisay, ugana adkaatay gardarrada iyo daan-daansiga Kenya.
Previous articleNorway oo ah dalka sadexaad ee Yurub dadka ugu badan ay u dhintaan adeegsida daroogada.
Next articleSvolvær: Haweenaydii ku dhaawacantay shilka oo maanta geeriyootay.
Ilhaan Cumar oo mar kale gaartay guul siyaasadeed oo muhiim ah
Baarlamaanka Norway oo bari go´aan ka gaarayo in caruurtan qoxootiga Norway loo soo qaado.
Norway: Qoxooti si qaldan loo xukumay oo kiisaskooda dib loo furi doono.
Nirvan(6 sano jir): Waxaan jeclahay inaan ku heeso heesaha soomaalida.
Gabar 27-sano jir wasiir ka noqotay mid kamid ah wasaaraddaha ugu culus Norway.